Inventory Control | Happy Sales - POS Supply
ဂိုဒေါင်လက်ကျန်လေးကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ကြမယ်
ဂိုဒေါင်လက်ကျန်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာ ယနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အခက်ခဲဆုံး ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂိုဒေါင်လက်ကျန် မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပစ္စည်းပြတ်လပ်ခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မျှဝေ ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဂိုဒေါင်လက်ကျန် ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို အချက်တွေကြောင့် ဂိုဒေါင်လက်ကျန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် မထိန်းချုပ်နိုင်တာလဲ?
ပထမဆုံးအနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ Update ဖြစ်တဲ့ ဂိုဒေါင်လက်ကျန် စာရင်း မရှိတာပါ။ လက်ကျန်စာရင်းမရှိတဲ့အတွက် ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ချက်ချင်းမသိနိုင်သလို လက်ကျန်သိချင်တဲ့ အခါတိုင်း ပြန်လည်ရေတွက်ရတာ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းပါတယ်။ ကုန်အမျိုးအစား များတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ နေ့စဉ်အရောင်းအဝယ်များတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်း Manual System (လက်ရေးစနစ်)နဲ့ စာရင်းတွေမှတ်သားမယ်ဆိုရင် အလျင်မှီအောင် လက်ကျန်စာရင်းတွေ Update လုပ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
📎 စာရင်းမှားယွင်းခြင်း၊ စာရင်းမှတ်သားရန် ကျန်ရှိခြင်း
တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ လက်ကျန်စာရင်း ရှိရဲ့သားနဲ့ မမှန်ကန်တာ ဘာကြောင့်လဲ။
စာရင်းအမှတ်မှားခြင်း၊ မှားယွင်းစွာ တွက်ချက်မိခြင်း၊ စာရင်းမှတ်သားရန်ကျန်ရှိခြင်းတို့ဟာ များသောအားဖြင့် Human Errorကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှားတွေပါ။ Cashierတွေဟာ ပစ္စည်းတစ်ခုခြင်းစီကို စာရင်းမှားယွင်းစွာသွင်းမိခြင်း၊ သွင်းရန်ကျန်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် စာရင်းတွေ လွဲမှားကျန်ရှိခြင်းများ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
📎 ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း
ပစ္စည်းများပျက်စီးရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ ဂိုဒေါင်ထဲမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထားရှိခြင်းတွေနဲ့ မတော်တဆထိခိုက်ခြင်းတွေကြောင့်ပါ။ ပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးခြင်းကတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ မရိုးသားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ ပြင်ပမှ Customerအယောင်ဆောင်ပြီး ခိုးယူသူတွေကြောင့်လည်း ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးရတတ်ပါတယ်။
📎 ဂိုဒေါင်လက်ကျန် မစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
ဒီကိစ္စကတော့ Storeဆိုင်တွေ Mini Martတွေမှာများသောအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းအများကြီးကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းအလုံအလောက်မရှိခြင်း၊ တစ်ခါတည်းနဲ့ ပစ္စည်းတွေအများကြီးကို စစ်ဆေးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဂိုဒေါင်လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲလေ့ရှိတာကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။
📎 လက်ကျန် စစ်ဆေးရာတွင် မှားယွင်းခြင်း
ဒီပြဿနာကိုတော့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို နေရာတကျထားရှိမှုမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို စနစ်တကျ ထားရှိမထားတဲ့အတွက် လက်ကျန်ကောက်ရာမှာ မှားယွင်းမှုတွေ၊ စာရင်းကျန်ခဲ့မှုတွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒါဆို ဂိုဒေါင်ထဲက လက်ကျန် ကုန်ပစ္စည်းတွေမှန်ကန်ဖို့ ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ?
✔️ Inventory Control System တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ခြင်း
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Update ဖြစ်တဲ့ ဂိုဒေါင်လက်ကျန် စာရင်းထားရှိနိုင်ဖို့အတွက် Inventory Control System တစ်ခုလိုပါတယ်။ သို့မှသာ ဂိုဒေါင်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ လက်ကျန် အရေအတွက်ကို ကွန်ပျူတာစာရင်းမှာ မှတ်သားထားတဲ့ လက်ကျန် အရေအတွက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ Inventory Control System ဟာ POS System, ERP System အစရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်တွေမှာ များသောအားဖြင့် Module တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။
✔️ နည်းပညာ အကူအညီရယူခြင်း (Barcode, RFID, Automation)
သင့်ရဲ့Inventoryမှာ Barcode Systemတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်း ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို မှန်မှန် ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထည့်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာရင်းမှားယွင်းထည့်သွင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
RFID Technologyကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်း စာရင်းတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ RFID technology ဟာ Barcode Systemလို Labelတစ်ခုချင်းကို Scanဖတ်နေစရာမလိုပါဘဲ မိမိစစ်ဆေးချင်တဲ့ စင်နားကို RFID Scannerလေးတစ်ချက်ရမ်းလိုက်တာနဲ့ ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို သိရှိနိုင်လို့ အရမ်းကို လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် RFID ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းတော်တော်များများဟာ Barcode Systemကိုပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။(နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပိုမိုတွင်ကျယ်လာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်)
Automation ဆိုတဲ့ Technology ဟာလည်း RFIDနည်းတူ ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ Technologyတစ်ခုပါ။ Roboticတွေ Automatic Programတွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနေရာချထားခြင်းတွေ၊ Storeလုပ်ခြင်းတွေ၊ pickup လုပ်ခြင်းတွေ၊ စစ်ဆေးခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် မှန်ကန်တိကျမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။
✔️ ဂိုဒေါင်ကို စနစ်တကျ ဖြစ်အောင် တည်ဆောက် ထားရှိခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဂိုဒေါင်ရဲ့ သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့် အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေကို အလွယ်တကူ​ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ (ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထားချင်သလိုထားခြင်း ၊အဆင်ပြေသလိုထားခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဥ်သင့်ပါတယ်)
ဒီနေရာမှာတော့ Japanese Style Management တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 5S လိုမျိုး နည်းလမ်းတွေက သင့်လုပ်ငန်းကို များစွာ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
(5Sအကြောင်းကိုတော့ နောင်ပိုင်းမှာ အသေးစိတ် မျှဝေပေးသွားပါ့မယ်ရှင့်)
✔️ Employee Training
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Human Error တွေလျှော့ချဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို Training ပေးဖို့လိုပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်လုပ်ရာတွင် မှန်ကန်တိကျမှုရှိအောင်၊ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်လာအောင်၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတို့ ရှိလာအောင် သေချာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ကလည်း အခရာကျလှတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ Rewards and Punishment လို့ခေါ်တဲ့ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ် တွေကိုလည်း ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။
✔️ Daily Inventory Check
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများသော လုပ်ငန်းတွေအတွက် လက်ကျန်ပစ္စည်းအားလုံးကို စစ်ဆေးဖို့ရာ အခက်အခဲများစွာရှိပါတယ်။ ဒီတော့ နေ့စဥ် အဝင်အထွက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ ရွေးထုတ်ပြီး အဓိကဦးစားပေး အနေနဲ့ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ တစ်နေ့စာတစ်နေ့ စာရင်းတွေမှန်ကန်ကာ စာရင်းမှားခြင်း၊ သွင်းရန်ကျန်ခဲ့ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ စာရင်းများမှားယွင်းနေခဲ့ရင်တောင်မှ တစ်နေ့စာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
✔️ Periodic Inventory Check
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်း တစ်ပတ်တစ်ခါ တစ်လတစ်ခါ စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့်လည်း လက်ကျန်စာရင်းကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အပျက်အစီး အပျောက်အရှများကိုလည်း အချိန်မှီ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
✔️ Security and Authentication
စာရင်းပိုင်းကို မှန်ကန်အောင် ထားရှိရမည့်အပြင် ပစ္စည်းများ မပျောက်ရှရအောင် ပစ္စည်း အသွင်းအထုတ်များကို သေသေချာချာ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ သင့်ဂိုဒေါင်ကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် တံခါးပေါက်များထားရှိခြင်း၊ မလိုအပ်သည့်အချိန်တွင် သော့ခတ်ထားခြင်း၊ Security ကောင်းကောင်းချထားခြင်း၊ Showroom များတွင်လည်း EAS လို လုံခြုံရေး စနစ်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့်လည်း ကုန်ပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သင်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ ဂိုဒေါင်ထဲက လက်ကျန် ကုန်ပစ္စည်းတွေ မှန်ကန်စေရန်အတွက် ထိန်းချုပ်နည်းတွေကို သိရှိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ လက်တွေ့လိုက်လံ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။